लकडाउनको बेला एका बिहानै कृषि बजारमा के भयो यस्तो ? प्रहरी प्रमुख देखी मन्त्री पुगे हेर्न (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
लकडाउनको बेला एका बिहानै कृषि बजारमा के भयो यस्तो ? प्रहरी प्रमुख देखी मन्त्री पुगे हेर्न (भिडियो)
पोखराको कृषि उपज बजारमा बिहानै मन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख सहितको टोली पुग्यो । लकडाउनको बेला प्रमुख व्यक्तिहरुनै पुगेपछि उनीहरुको सुरक्षाका लागी खटिएका र सहयोगीहरुले नै एक ठूलो भिड जम्मा गरिसकेको थियो अझ कृषि उपज बजारमा रहेका कृषकहरुको जमघटले झन भिड बाक्लिदै गयो । भण्डारण गरिएका तरकारी बिक्रि गर्न नपाएको र बाहिर बाट तरकारी बोकी आएका सवारी साधन बाटोमा रोकिएको ब्यवसायी गुनासो गरेका छन् । उक्त गुनासो पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको रोहबरमा पर्यटन मन्त्री बिकास लम्साल, कास्की प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की तथा उपभोक्ता मञ्च कास्कीले अनुगमन गरेको हो । के देखियो त अनुगमनमा ? हामीले खाने तरकारी ठिक छन् ? हेर्नुहोस् पुरा भिडियो ।